RASMI: FIFA Oo Ku Dhawaaqday In Wax Laga Badalay Qaabkii Loo Soo Xulan Jiray Liiska Musharixiinta Abaal Marinta Xidiga Aduunka Ugu Fiican Ee The Best. - GoolTV.Net
Xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay wax ka badaleen qaabkii loo soo xulan jiray liiska musharixiinta abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ee The Best. FIFA ayaa sidoo kale shaacisay waqtiga la shaacin doono liiska ciyaartoyda ku soo bixi kara liiska abaal marinta The Best.
Xidhiidhka kubbada cagta aduunka ee FIFA ayaa shaaciyay in liiskii 23ka ciyaartoy ee la soo saari jiray wax laga badalay isla markaana sanadkan laga dhigi doono 10 ciyaartoy oo kaliya. FIFA ayaa hore u shaacin jirtay liiska 23ka xidig ee abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican u tartami jiray laakiin waxaa hadda lagu soo koobay 10 musharax oo kaliya.
Liiska musharixiinta ciyaartoyda ragga iyo dumarka ee abaal marinta xidigaha aduunka ugu wanaagsan ayaa laga saaray 13 ciyaartoy iyada oo mid kastaba oo ka mid ah musharixiinta ciyaartoyda ragga iyo dumarka aduunka ugu fiican laga dhigi doono min 10 musharax oo kaliya.
FIFA ayaa shaacisay in guddi ay ka mid yihiin Ronaldo Nazario, Fabio Capello iyo Frank Lampard ay go’aamin doonaan liiska 10 ka musharax ee xidiga aduunka ugu fiican iyada oo khabiirada guddidan ku jiraa ay go’aamin doonaan ciyaartoyda sanadkan u sharaxnaan doonta abaal marinta The Best ee ay FIFA bixiso.
Dhinaca kale FIFA ayaa ku dhawaaqday waqtiga la shaacin doono liiska 10 musharax ee abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican waxaana liiska 10 musharax ee cusub lagu dhawaaqi doonaa July 23 oo ah siddeed maalmood oo kaliya kadib marka uu koobka aduunku soo dhamaado.
Kadib FIFA ayaa si rasmi ah u furi doonta codbixinta jamaahiirta aduunka si la mid ah tababarayaasha iyo kabtanada xulalka qaramada aduunka halka ay sidoo kale ka qayb gali doonaan 200 wariye oo saxaafada laga soo casuumi doono kuwaas oo qayb ka noqon doona go’aaminta xidiga abaal marinta The Best 2018 ku guulaysan doona.
Codbixinta FIFA ee musharixiinta 10 ah ee u u tartami doona abaal marinta xidiga aduunka ugu fiican ayaa soo xidhmi doonta August 10,2018 halka magacyada guulaystayaasha lagu dhawaaqi doono September 24 marka xaflada abaal marinaha FIFA lagu qbato magaalada London ee dalka England.